नर्सरीमा अजम्मरी कलासहित जमेको गुप्ता परिवारको ३ पुस्ता
यदाकदा मात्र व्यवसायमा पुस्ता हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । घाम–पानी जस्तै । कसैले ठान्छन् पुस्ता हस्तान्तरण अनुहार बदल्ने कुरा मात्र हो तर रूपन्देहीमा एक परिवारको ३ पुस्ता एउटै व्यवसायमा छ ।
जिल्लाको तिलोत्तमा–४ ड्राइभर टोलस्थित गुप्ता नर्सरीमा परिवारको ३ पुस्ता माली बनेर रमाएको छ । गुप्ता परिवार फूलसँगै अन्य फलफूलका विरुवा उत्पादनमा लागेको ५२ वर्ष भयो ।
चाडपर्व होस् वा अन्य कुनै समय गुप्ता परिवार फूल र विरुवा उत्पादनमा लागिरहेको छ । २०२२ सालमा स्व. रघुनाथ गुप्ताले ८ कठ्ठा जग्गाबाट नर्सरी व्यवसाय शुरू गरेका थिए । रघुनाथले नर्सरी शुरू गर्दा ड्राइभर टोललाई नंकौटी भनिन्थ्यो ।
गुप्ता नर्सरी रूपन्देहीमा मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशमै प्रख्यात छ । अहिले विभिन्न ठाउँमा पर्याप्त नर्सरी खुले पनि विरुवाको लागि मानिसहरूको रोजाइमा पर्छ गुप्ता नर्सरी ।
रघुनाथले तरकारी खेतीसँग जोडेर नर्सरी थालेका थिए । अहिले नर्सरीले ५ दशक पार गर्दा ठूलो लगानी र उत्कृष्ट नर्सरीको रूपमा विकास भएको छ । परिवारको ३ पुस्ताले नर्सरीलाई रिसर्च सेन्टर नै बनाएको छ ।
स्व. रघुनाथका छोराहरू विनोद, शम्भू, राजेन्द्र, राजेश, सुरज, अर्जुन र नातिहरू आर्किटेक इन्जिनीयर अजय समेत अहिले नर्सरीमा काम गर्न व्यस्त हुन्छन् । साँच्चै गुप्ता परिवारको विरुवा उत्पादन कला अजम्मरी छ ।
गुप्ता नर्सरीले फूलसँगै फूलका विरुवा र फलफूलका विरुवा बिक्री गर्दै आएको छ । नयाँ युगलाई नर्सरीले सम्बोधन गरेको छ । फूलमा रमेको गुप्ता परिवारमा अहिले ६ परिवारका २८ जना यसैमा तल्लिन छन् । ६ दाजुभाइ मिलेर गरेको नर्सरी व्यवसायबाट उनीहरूले मनग्यै आम्दानी पनि गरेका छन् ।
नर्सरीले फूल र विरुवा उत्पादनसँगै पुष्प व्यवसाय र नर्सरी सम्बन्धी परामर्श सेवा, अनुसन्धान र ठूला होटल, रिसोर्ट, सरकारी–गैरसरकारी कार्यालयहरूमा गार्डेनिङ पनि गरिरहेको छ ।
सञ्चालक सुरज भन्छन्, ‘हाम्रो सबै परिवार फूल र विरुवामै केन्द्रित छ । उत्पादन बढाउँदै लगेका छौं । अब हाम्रो नर्सरी अनुसन्धान केन्द्र पनि बनेको छ ।’
रघुनाथका नाति विनोदका छोरा अजय अस्ट्रेलियाबाट आर्किटेक इन्जिनीयर बनेर ठूला रिसोर्ट र सरकारी कार्यालयमा गार्डेन डिजाइन गर्छन् । फूलमा भाइहरूको कहिल्यै बेमेल छैन ।
अहिले कुनै पनि शुभकार्यमा फूल अनिवार्य जस्तै छ । समय परिवर्तनसँगै विश्वमै फ्लोरीकल्चरको महत्त्व बढ्दै गइरहेको छ । गुप्ता नर्सरीका विरुवासँगै उत्पादित फूल हरेक शुभकार्यमा पुग्छन् । त्यति मात्र होइन, उनले बुटवल बाहिर पनि फूलहरू निर्यात गरिरहेका छन् । रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पोखरा र काठमाडौं गुप्ता नर्सरीका मुख्य बजार हुन् ।
अन्नामेटल प्लान्ट, ग्रीन प्लान्ट र डेकोरेसनका लागि आवश्यक १५० भन्दा बढी प्रजातिका फूल नर्सरीमा भएको सञ्चालक सुरज बताउँछन् । नर्सरीबाट फूलसँगै वार्षिक ४ लाख फलफूल र फूलका विरुवा उत्पादन गरी बिक्री गरिन्छ ।
नर्सरीमा आँप, लिची, कटहर, अम्बा, कागती, सुपारी, नरिवल लगायतका विरुवाहरू समेत पाइन्छन् । यी सबैका विरुवा गुप्ता आफैंले तयार गर्छन् । त्यति मात्र होइन, नर्सरीले सिजनल फूलबाहेक ‘भ्यालेन्टाइन डे’का लागि गुलाब, दशैंमा दूर्गा पूजाका लागि र बर्खामा फलफूल लगाउने समय भएकाले टार्गेट गरेर फूलहरू एवं विरुवा तयार गर्ने गर्दछ । नर्सरीमा २५ देखि विरूवाको साइज अनुसार १ हजारसम्म र सजावटका लागि १२५ रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँसम्मका फूलका विरुवा बिक्री गरिन्छ ।
अहिले नर्सरीका विभिन्न ठाउँमा शाखा पनि विस्तार भएका छन् । ड्राइभर टोलसँगै तिलोत्तमाकै मणिग्राम, ओमसतियाको गाउँपालिकाको ठुटेपिपल र पाल्पा तानसेनको प्रभासमा गरी ५ बिगाहा क्षेत्रफलमा नर्सरी विस्तार भएको छ । यस क्षेत्रमा माग हुने फूलको ७५ प्रतिशत बजार गुप्ताको नर्सरीले ओगटेको छ । रूपन्देही बाहिर पनि वार्षिक १ करोडको कारोबार हुने सुरजले बताए ।
फूलमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएका गुप्ता नर्सरीका सञ्चालकहरू बजारको समस्या हुने गरेको बताउँछन् । फूल देख्दा आनन्द र राम्रो लागे पनि फूलको व्यापारमा जोखिम बढी छ । ‘कसैले सानो दाग लागेको देखे भने लैजाँदैनन्, चाडपर्वमा लक्षित गरेर ठीक समयमा तयार गर्न आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।
धर्मकर्मदेखि अन्तिम संस्कारसम्म आवश्यक पर्ने फूलहरू पछिल्लो समय विकसित देशबाट नेपालमा आउने गर्दछ । कतिपयले हाइब्रेड बीउ नै नेपालमा ल्याएर विरुवा तयार गर्ने गर्दछन् । गुप्ता नर्सरीले पनि हाइब्रेड बीउ होल्यान्ड, डेनमार्क र केही भारतबाट ल्याउने गर्छ । झुप्प थुंगा भएका फूलहरू सजावटका लागि बढी माग हुन्छ । त्यस्ता फूलको आवश्यक हाइब्रेड बीउ गुप्ताले विदेशबाट भित्र्याउँछन् । नर्सरीले ड्यान्कस, सिनेरिया, पिटुनिया, फलक्स लगाएका बिउ विदेशबाट ल्याउने गरेको छ ।
गुप्ता परिवारले तरकारीसँगै फलफूल खेतीलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । ‘तरकारी खेतीलाई सँगै अगाडि बढायौं भने बुवाको सपना पनि पूरा हुनेछ । त्यहीँ योजनाका साथ हामीले पाल्पामा जग्गा खोज्ने काम गरिरहेका छौं,’ सुरजले भने ।
पाल्पाको प्रभासमा ६० लाखको लगानीमा २० रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती शुरू भइसकेको र १५० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा भाडामा ल्याउने अन्तिम तयारी भएको उनले बताए ।
पाल्पामा स्कस, सिमी, लहरेसिमी, कागती लगायतका तरकारी खेती गर्ने र तरकारीलाई इटाली पठाउने योजना गुप्ता परिवारको छ । गुप्ता ग्रूप प्रालिमार्फत विभिन्न प्राजेक्टबाट काम भइरहेको छ । प्याकेजिङ, ग्रेडिङ गर्नुका साथै स्थानीय किसानको समेत तरकारी खरिद गर्ने योजना बनेको छ ।
तिलोत्तमास्थित टाइगर रिसोर्टको बगैंचाको डिजाइन अजय गरेका हुन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले अघि सारेको ग्रीन तिलोत्तमा अभियानमा पनि अजयको सल्लाहबाट बेगमबेली र स्टोनिया लगाइएको छ ।
रघुनाथका अर्का नाति अर्जुनले पनि हाल अस्ट्रेलियामा कृषि सम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी नेपाल आएर एग्रिकल्चरमा जमेका छन् । गुप्ता नर्सरीलाई सन् २००३ मा स्वीजरल्यान्डको जेनेभास्थित बीआईडी संस्थाले इन्टरनेसनल गोल्ड स्टार अवार्ड प्रदान गरेको छ ।
फूलको बजार दिनानुदिन विस्तार भइरहेको छ । नेपाली बजारमा भारतीय फूलको आयातलाई विस्थापित गर्न उद्यमीहरू व्यावसायिक फूल खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
रक्तदानका लागि सदैव तम्तयार हरिमोहन
नेपालमा विदेशीका अपराधः एटीएम ह्याक, तस्करीदेखि य...